Sombulula ZONKE izinkinga zakho ngeTouchpad | Kusuka kuLinux
Sombulula ZONKE izinkinga zakho nge-Touchpad
Sanibonani, ninjani bangani?
Sebenzisa I-ArchLinux (ukuthi abaningi bayazi hehe), kuyenzeka ukuthi iphedi yokuthinta ye-laptop yami (i-Synaptics touchpad) isebenze ngendlela ejwayelekile, okungukuthi, ngidlulisa umunwe wami endaweni bese isikhombisi sihamba, kepha asiphenyi sibheke phezulu, noma ngabe ngicindezela nge umunwe endaweni uyachofozeka noma yini efanayo.
Iqiniso ukuthi bekufanele ngilungiselele ngesandla iphedi yokuthinta, futhi nazi izinyathelo 😉
1. Vula itheminali.
2. Bhala kulo okulandelayo:
Izocela iphasiwedi yakho, bayibhale bese bayacindezela [Faka]
3. Embhalweni noma kufayela lombhalo elizovulwa, kufanele banamathisele lokhu engibashiyele khona LAPHA.
4. Uma isinamathele lapho, bayayisindisa bese beyivala.
5. Ilungile, qala kabusha futhi kufanele usebenzise iphedi yokuthinta isebenza ngokugcwele 😀
Uma ufuna kwenziwe noma yiziphi izinguquko, ukungabaza, imibuzo noma yini, ngazise.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Sombulula ZONKE izinkinga zakho nge-Touchpad
dica omuhle, ngizobhala encwadini yami yokubhalela!
Kuhle kakhulu, ngizozama. Ngiyabonga.
Lokhu ukwenza kusebenze i-multitouch yephedi? Ngine-multitouch enikwe amandla ukuskrola, kepha hhayi ukusondeza. Nami ngingumsebenzisi we-ArchLinux, ngigculiseke kakhulu ngalokhu kusatshalaliswa ngemuva kokuphula ama-ubuntus ama-2 no-1 we-debian haha ​​🙂
Iphedi yami yokuthinta ayinakho ukusekelwa kwe-multitouch, okungukuthi, lokhu kulungiselelwa engikubekayo kuvumela ukupheqa ngezindlela ezimbili:
- Ukuswayipha umunwe wakho phezu kwesigaba noma indawo yephedi yokuthinta ehloselwe ukuskrola (ingxenye engakwesokudla enemigqa emincane ...)
- Uma ubeka umunwe ongu-1 esikhundleni salokho, beka iminwe emi-2 noma kuphi kuphedi yokuthinta bese uyislayida phansi naphezulu, uzobona ukuthi iskrola kanjani.
Ingabe yilokhu okushoyo?
Ngokuqondile, ukuskrola ngeminwe emi-2 kubonakala kimi njengokuthinta okuningi. Ngisebenzise umqulu ngeminwe emi-2 nangenye engakwesokudla kwephedi yokuthinta, kepha futhi nginethuba lokusondeza ngeminwe emi-2 ngesitayela se-iphone (ihlolwe ku-win7), kepha ku-linux angikwazanga ukuyenza isebenze okwamanje. Manje ngise-pc ukulungisa, kepha-ke ngikunikeza i-10-synaptics.conf yami, emfushane kuneyakho.
Ngiyakuqonda, umqulu owukhulumayo umqulu oyisiyingi, akunjalo? Ku-conf engiyibeke kukhona imigqa yalo mqulu, kufanele uvele uyinqande, uqale kabusha bese ungitshela ukuthi iyakusebenzela yini.
HAHAHA yebo ... okwami ​​kubanzi HAHAHA ... ngizamile ukukuhlanganisa konke HAHAHA
Kuhle, bengingazi ngomqulu oyisiyingi, manje sengiyasebenza futhi ngizokutshela 🙂
I-10-synaptics.conf yami inokulandelayo nje:
Ngalokho nginomqulu ohlangothini lwesokunene nokuthepha (ngicabanga ukuthi kubizwa kanjalo) ukuchofoza.
Iscroll esineminwe emi-2 engikusebenzise kusuka ekucushweni kwe-xfce.
Ngikufisela inhlanhla, angiyena uchwepheshe kude nayo kepha noma yikuphi ukungabaza lapha engikhona
Umqulu oyisiyingi awusebenzi kimi, bekufanele ngikhiphe umugqa kulayini othi Option "CircularPad" "0"
Futhi ngiyabona nje ukuthi ukhubaze ukuskrola okuvundlile ngeminwe emi-2, kuyasebenza ngakunye noma kungavunyelwa bobabili ndawonye?
Ah, kulungile yehe hehe… 0 = kukhutshaziwe 😀
Umqulu ovundlile oneminwe emibili awusebenzi kimi, kepha kungenzeka ngoba iphedi yami yokuthinta ayikuvumeli ... bengazi, ngifaka leyo migqa ngilindele ukuthi izosebenzela omunye umuntu 😉
Isihawu! Endabeni yami akukho okushintshile ...: S
Sizoqhubeka nokuzama i-xD
I-WTF… iyamangalisa, ngiyivivile kwi-laptop engaphezu kweyodwa futhi isebenze 🙁
Ngiyaxolisa mngani ..
Hache, ngiqala nge-Arch, futhi ekuqaleni kwenzeka into efanayo kimi, ngaya ku-wiki yangitshela ukuthi kufanele ngifake i-xf86-input-synaptics, ngemuva kwalokho ngafaka okuvela kunamathisela okwabiwe ngu- @ I-KZKG ^ Gaara <"I-Linux nayo yonke into iphelele.
Kuyintokozo ukwazi ukuthi kukusebenzele 🙂
Ukubingelela futhi wamukelekile kubhulogi 😉
Umbuzo engifuna ukwazi ukuthi ungakwazi yini ukwenza kusebenze ukusondeza nganoma iyiphi indlela lapho wenza ama-pilliscos kuphedi yokuthinta?
i-pilliscos? Uxolo, angikuzwisisi 🙁
umbuzo ukucushwa kungisebenzele kahle ku-debian yami kuya eqophelweni ngoba angikwazi ukwenza ukuskrola kwesinye isiphequluli kukhuphuke kuye phansi angazi ukuthi kubizwa kanjani ngobuchwepheshe. ungaba nomqondo wokuthi ungayixazulula kanjani?
imikhonzo kanye nebhulogi enhle kakhulu
Lokhu kungenxa yokuthi ukumiswa uma ngikhumbula kahle ngikubeke ukuze umqulu noma ukunyakaza okuqondile (kusuka phezulu kuye phansi nangaphambene) kube neminwe emi-2. Faka iminwe emi-2 kuphedi yokuthinta uyihambise yomabili phezulu nangaphansi ngasikhathi sinye, ngitshele ukuthi iyakusebenzela yini.
ulungile isebenza ngeminwe emi-2, uyakhumbula ukuthi ungayiguqula kanjani ukuze ibe nomunwe owodwa?
ngiyabonga futhi maqondana
Kulayini 57 lapho ithi: Inketho «VertTwoFingerScroll» «1»
Shintsha leyo 1 ibe ngu-0 futhi kufanele usuvele ungasebenzi iminwe emi-2.
Ngiyiguqule njengoba ungitshele kodwa ayisebenzi
Ingabe uqale kabusha ikhompyutha?
uma ngiqala kabusha ikhompyutha icacile
kuyaxaka ngoba kwi-pc efanayo ngine-manjaro futhi futhi nalokhu kulungiswa okufanayo nephedi yokuthinta isebenza kahle kakhulu
Kungisebenzele kahle kwi-Debian Wheezy, ngiyabonga kakhulu.
Sawubona, unjani, mngane, ungaphinde ulayishe le khodi uma ingeyona inkinga enkulu. ngiyabonga ngawo wonke umnikelo owunikelayo
Sawubona, ngabe othile anganginika ukucushwa kokuthi isixhumanisi asisekho, ngicela ukubonga.
Uma ingithola. Kepha nginenkinga encane. Ukhiye we-ENTER awusebenzi kimi. ngingenza kanjani?
I-Linux Mint Olivia (15) ilayishwe kusuka ku-usb.
Ikhompuyutha ephathekayo ye-HP nx6110.
U-Ivan Molina kusho
Ngisebenzisa lo myalo:
futhi wangiphakela iphedi yami yokuthinta 😀
I-sudo modprobe -r psmouse && sudo modprobe psmouse proto = imps
Ngikuhlolile ku-Acer Aspire One D257
Phendula u-Ivan Molina
Kuhle! Isebenza kahle kakhulu. Siyabonga ngolwazi =)
Akungisebenzelanga. Angisakwazi ukupheqa kuKubuntu 14.04 (lapho ngasendleleni, ifayela okukhulunywa ngalo ngu /usr/share/X11/xorg.conf.d/50-synaptics.conf, noma okungenani angikatholi enye) .
Futhi, lapho ngivula i-KDE Systemsettings> Amadivayisi wokufaka> I-Touchpad, ngithola umyalezo othi "Umshayeli we-Synaptics akafakiwe (noma akasetshenziswanga)", noma ngine- "xserver-xorg-input-synaptics '. Angazi ukuthi ngenzeni manje, iqiniso ukuthi iphedi yokuthinta iyangisebenzela kepha umqulu awusebenzi (kwiWindows wenziwa ngeminwe emibili kule khompyutha), nokuthi imodyuli yokumisa iphedi yokuthinta ye-KDE yeqa nami ngalokho umyalezo ungenza ngisole ukuthi uhlobene nawo, kepha angazi ukuthi ngingawulungisa kanjani. Yimiphi imibono ezungeze lapha?
UJesu Guillermo Rivera kusho
sawubona, ngimusha ku-linux, ngikuthola kunzima kakhulu, kepha-ke ngifuna ukufunda.
Ngicela ungisize, ngine-HP Folio 13 lap, inephedi yokuthinta ye-synaptics, kepha isebenza kancane> okusho ukuthi, ayiqondile kakhulu lapho ngifaka umunwe wami kuyo, engenzeki emafasiteleni, ngingathanda ukwazi ukuthi kwenzelwa abashayeli yini, futhi uma kunjalo, ngibafaka kanjani abashayeli baleli gundane ku-linux mint sinamoni, ngiyabonga
Phendula ku jesu guillermo rivera
UJose Francisco kusho
Sawubona, ngifisa ukwazi ukuthi ngingawusebenzisa kanjani umqulu oqonde mpo we-Ubuntu 12.04 lts «kuyenzeka ukuthi iphedi yokuthinta ye-laptop yami (i-Synaptics touchpad) isebenze ngendlela ejwayelekile, okusho ukuthi, ngidlulisa umunwe wami endaweni bese i-pointer iyahamba, kepha ayiphenyi ibheke phezulu, futhi lapho ngicindezela ngomunwe endaweni ingabe iyachofoza noma yini efana nayo »into efanayo iyenzeka kimi. Ngingathanda ukwazi ukuthi ungangisiza yini, ngiyabonga.
Phendula uJose Francisco
U-Enrique Delgado kusho
Kwi-HP Pavilion 250 Laptop Computer - G4 TPN-C125 - I-Debian 8 64bits isebenzisa lokho okukhonjiswe ngu-Ivan Molina.
Ngibonga kakhulu ngawo wonke umnikelo !!!!
I-PS: Isixhumanisi sokufinyelela kukhodi asisasebenzi, kungakuhle ukusilayisha futhi 😉
Phendula u-Enrique Delgado
Sawubona, ungaphinda ulayishe ifayili ngoba alisebenzi futhi nginezinkinga ngombonga wami wokuthinta
Yuri Lazo kusho
isixhumanisi sakho esithi "lapha" sonakele, ngidinga lolu lwazi, uma ungalibuyekeza, ngingalujabulela kakhulu, ngiyabonga kakhulu kusengaphambili
Phendula u-Yuri Lazo
Sawubona, nginenkinga ngegundane lami lephedi yokuthinta; Uma ngiligudluza ngokucindezela Ukhiye, alihambi futhi Lokhu kunzima kakhulu kweminye imidlalo engivela kuyo eLubuntu
Ingelosi Rodriguez kusho
Kuhle okuhle. Uxolo, ngithanda ukulungisa leli phutha. Ngichofoza kusixhumanisi salokho okufanele ngikunamathisele futhi akukho lutho.
Phendula u-Angel Rodriguez
I-HDP. ayisebenzi futhi ziyizikhangiso nje.
Ukhetha bani: Ubuntu, Debian, noma bobabili?
I-Adobe Flash inikezela nge-HTML5 futhi idonsa amadivayisi eselula